gvSIG waxaa lagu soo bandhigi doonaa LatinoWare 2008 - Geofumadas
gvSIG waxaa lagu soo bandhigi doonaa LatinoWare 2008
Oktoobar, 2008 Geospatial - GIS, GvSIG
Laga soo bilaabo 30 ee Oktoobar ilaa 1 ee Noofembar, dhacdada LatinWare 2008 waxaa lagu qaban doonaa Park Technological Park ee Itaupú, Brazil, halkaas oo V Latin America American Free Software Conference la qaban doono.
Waxaa la filayaa dhacdada in ka badan 2 malaayiin dad ah, oo ka mid ah ardayda, xirfadleyda iyo takhasusayaasha qaybta. iyo dhinacyada ku lug leh dareenadeena waa in aagga GIS uu ka mid yahay mowduucyada la tixgelinayo sanadkaan oo ah rajo.
Waxay ku jirtaa gvSIG in lagu soo bandhigi doono bandhig bandhigeed iyo aqoon-isweydaarsi oo ujeedkiisu yahay in kor loo qaado wacyigelinta iyo tababaro shaqaalaha xiiseeya maamulka xuduudaha leh qalab bilaash ah. Ilaa hadda sida la og yahay, gvSIG waa qalab joogta ah oo joogto ah oo ku yaal Brazil, oo ay isticmaalaan maamullo iyo jaamacado kala duwan.
Ka qaybgalka ugu yaraan Victoria Agazzi, isku-duwaha hadda ee mashruuca gvSIG iyo André Sperb, oo xubin ka ah OSGEO, ayaa la filayaa.
Latinoware waxay u adeegi doontaa barta ugu horeysa ee ururada iyo dadka xiiseynaya inay qabtaan cutubka Brazil ee OSGeo, iyagoo u dabaaldegaya munaasabadda shirarka ugu horreeya oo u adeega tallaabada ugu horreysa ee abuuritaanka bulshada Brazil.
Sidoo kale dhacdadani waxay noqon doontaa shir qaran ee isticmaalayaasha khaanadaha loo yaqaan "Maperver.
Post Previous«Previous Shirkadda 2009, Febraayo ee Havana
Post Next Waa caadi, ka dib, :)Next »
Hal Jawaab u Jawaab "gvSIG waxaa lagu soo bandhigi doonaa LatinoWare 2008"
Waxyaabaha ku saabsan 2 malaayiin qof ayaa u muuqda kuwo aad u buun-buuninaya, waxaa laga yaabaa in ay khalad tahay website-ka dhacdadaa, laakiin taasi waa waxa uu ururka leeyahay)